Sajhasabal.com | Homeतिहारमा वत्ती जाने/आउने हुंदैन, ढुक्कले वत्ती बाल्नुस
चिसाङ शेर्पा | कार्तिक ८, खोटाङ | तिहार भनेको वत्ती नै वत्तीको पर्व हो । तिहारको मूख्य विशेषताभित्र पर्दछ विजुली वत्ती । विजुली वत्तीको यहि समयमा सवैभन्दा बढी माग हुन्छ । घरघरमा झिलीमिली पार्नलाई तिहारमा अन्य समयमा भन्दा बढी वत्तीको प्रयोग गरिन्छ । तिहारमा क्षणभरमै वत्ती जाने र आउने समस्या भने सेवाग्राहीहरुको टाउको दुखाई हो ।
तिहारमा सानाठूला शहर र दुरदराजका गाउँघरमा विजुलीको माग बढी हुन्छ । वत्ती त आउछ नै तर, मिनेट मिनेटमा वत्ती जाने हैरानीबाट यसपटक खोटाङका १४ हजार २१२ सेवाग्राही मुक्त होलान ? ढुक्कले विजुली वत्ती बाल्न पाउछन् त ? यस विषयमा नेपाल विधुत प्राधिकरण वितरण केन्द्र दिक्तेलका प्रमुख राम दिनेश राय यादवसँग कुराकानी ।
हामीले उदयपुरको जलजलेदेखी लिएर बुईपा सब–स्टेशन ६९ किलोमिटर प्रशारण लाईनमा पुरै बुस कटिङ गरायौ, लाईन मर्मत ग¥र्यौ, ११ केभी प्रशारण लाईन (५०४.७१ किलोमिटर) जुन गाउँगाउँको ट्रान्सफर्मसम्म पुगेको छ । तिनीहरुमा बुस कटिङ गरायौं, एलटी लाईन (ट्रान्सफर्मरबाट छुटेको ९३८.१७ किलोमिटर लाईन) पुरै चेक÷रिचेक गरेका छौ ।
तर, तिहारमा सिस्टम छिनछिनमा जान्छ नि ? यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
यो तिहारमा प्राकृतिक विपत्ती बाहेक खोटाङमा वत्ती जादैन । पोहोर साल पनि मैले यहि भनेको थिए । यसपाली पनि म यहि भन्छु । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेको छ । सव–स्टेशनको क्षमता डेढ एमबिए थियो अहिले तीन एमबिए बनाईसकेका छौ, त्यस कारण तपाईहरुले अहिले ढुक्क भएर वत्ती बाल्न सक्नुहुन्छ । अहिलेको तिहारमा वत्ती जाने÷आउने हुंदैन ।
तिहारमा विधुतीय घट्नाहरु पनि हुने गर्छन् । यसलाई हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?
तपाई आएपछि के,कस्ता प्रगती भए खोटाङको विधुत प्राधिकरणमा ?
म आउदा खेरी यहाँ दिक्तेल कार्यालयमा एउटा र हलेसीमा एउटा मोवाईल काउण्टर थियो । महशुल बुझाउन दिक्तेलसम्म आउन÷जान बसमा समेत करीव पुरै एकदिन लाग्ने, ८० रुपैयाँ विधुत महशुल तिर्न ३ हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो सेवाग्राहीलाई । ति सेवाग्राहीलाई महिनाको २३, २४ र २५ गते महशुल तिर्नका लागि खोटाङबजारमा मोवाइल काउण्टर सुरु गरेका छौ । अहिले त्यहाँ महशुल बुझाउने कामहरु भइरहेको छ ।